Maka: i-imeyili engenamsoco | Martech Zone
Maka: i-imeyili engenamsebenzi
Konke Ukumaketha Kwe-imeyili Ukuthi Ama-Sizzles Awona Ugaxekile
NgeSonto, Novemba 24, 2013 NgeSonto, Novemba 24, 2013 Douglas Karr
Le infographic evela ku-LeadPages, isixazululo sekhasi lokufika, inikeza ukuqonda okukhulu ngokukhangisa nge-imeyili kanye nezibalo ze-SPAM. Ukhiye wale infographic ukuthi mangaki ama-imeyili asemthethweni afinyelela kufolda engenamsoco. Amathuba yilapho iningi lakho likhona, futhi. I-imeyili esuselwa kwimvume iyaqhubeka nokuhola iphakethe ngamanani wokuchofoza angakholeki kanye namazinga wokuguqula. Amabhizinisi amaningi abeka yonke imizamo yawo kumasu okuthola ukuze aqhube ithrafikhi eningi abakhohlwa izindlela zayo
Ukuphepha Nokusebenzisa i-imeyili Emhlabeni jikelele
NgoMgqibelo, Ephreli 6, 2013 UMsombuluko, May 6, 2013 Douglas Karr
Sisanda kuzithola sisenkingeni nomhlinzeki wethu we-imeyili lapho siphinda sifaka amakheli amadala e-imeyili ku-akhawunti yethu. Ithani lazo liqhume, sathola izikhalazo ze-SPAM futhi othile wathukuthela kakhulu waze wathinta umhlinzeki wethu uqobo ukukhononda. Siqede ukukhipha amakheli e-imeyili ashiwo ku-akhawunti ngokuya ngesicelo esivela kumhlinzeki we-imeyili. Izibalo ezikule infographic ezivela kuSampula E-mail zikhomba ngqo
Lapho ngifunda indaba yakamuva mayelana neqembu le-IT e-UK elivimbele i-imeyili, bekufanele ngime ngicabange ngomsebenzi wami nsuku zonke nokuthi mangaki ama-imeyili angiphuca usuku olukhiqizayo. Ngibuze lo mbuzo kubafundi bethu ngenhlolovo yeZoomerang futhi bambalwa kakhulu abebecabanga ukuthi i-imeyili izofa noma nini kungekudala. Inkinga, ngombono wami, akuyona i-imeyili. Lapho i-imeyili isetshenziswa kahle, kunjalo